Jikọtara: Social Operating Platform | Martech Zone
Ejikọtara na-enye teknụzụ ahịa ahịa na ngwa ndị na-enyere nzukọ gị aka ijikwa usoro ndụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-enyefe ROI doro anya na ọnụọgụ. Ngwurugwu jikọtara ọnụ na-enye usoro ndekọ maka usoro maka ụdị, ụlọ ọrụ na ndị na-ere ahịa.
uru nke Njikọ Ọrụ Ndị Ọrụ Na-elekọta Mmadụ
Nwee ma chịkwaa data ahịa gị - The Social Operating Platform na-ejikọ ụlọ ọrụ niile, ndị na-ere ahịa na ụdị ị na-arụ ọrụ na otu usoro ahịa ahịa igwe ojii, na-enye gị echiche zuru oke nke nzukọ ahịa gị niile. Mee ka ụlọ ọrụ gị kwalite ngwa ngwa ma mee mgbanwe - ị nwere ike ịgbanwe ndị ọrụ, ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ndị otu n'ime na-agaghị efufu akụkọ ihe mere eme.
Mee mkpọsa mmekọrịta mmadụ na ibe ya - Ruo ndị ahịa n'oge kwesịrị ekwesị, jiri ozi ziri ezi, gafee ọtụtụ netwọkụ mmekọrịta site na otu ikpo okwu. Sistemụ Ọrụ Ndị Ọrụ na-enyere ndị njikwa obodo aka, ndị mgbasa ozi mgbasa ozi na ụlọ ọrụ okike iji rụọ ọrụ n'otu ebumnuche - na-eme ka ndị na-ege gị ntị rụọ ọrụ.
Na-ebuli mgbasa ozi akwụ ụgwọ, nke nwere ma nweta ya - Mee ka dollar ọ bụla ị na-emefu na mgbasa ozi gaa n'ihu - lee karịa ịpị aka na mmetụta ma malite ịkachasị maka mmetụta kachasị site na ịghọta otu mgbasa ozi gị akwụ ụgwọ na -emepụta uru mgbasa ozi ọzọ akwụgoro mgbe ndị mmadụ na-etinye ọdịnaya gị. Nrụrụ ọrụ mmekọrịta ọha na eze bụ naanị ihe ngwọta nke na-eme ka mgbasa ozi akwụ ụgwọ, nke nwere ma nweta ya.
Tugharia data buru ibu n’ime ROI - Mee ka akuko gi di nfe site na ikenye omume ndi mmadu (obi uto, okwu, mbak, tweets, wdg) uru nke aka ha, na-enyere gi aka itule ma bulie maka nloghachi kachasi na ugwo. Kwado onye ọ bụla na otu gị ka ịlele arụmọrụ dabere na ROI, kama ilekwasị anya na usoro dị nro ma ọ bụ nke na-enweghị isi dịka njikọ aka ma ọ bụ iru.
Mee mkpebi ndị data na-eme - The Social Operating Platform normalizes na quantifies gị ahịa data iji nyefee azịza nke ajụjụ ndị dị ka nke ikpo okwu mepụtara ROI kasịnụ maka mkpọsa a? Kedu onye na-ere ma ọ bụ PMD rụrụ ọrụ kacha mma n'oge oge enyere? Kedụ ka anyị nwere ike isi tinye ego na mgbasa ozi ọha na eze nke ọma?
Ndụ mmekọrịta dị n'otu
Tags: akwụ ụgwọ mgbasa ozinwere mgbasa oziakwụ ụgwọ mgbasa ozielekọta mmadụ mkpọsasistemụ nrụọrụ na-elekọta mmadụjikọtara ọnụn'otu na-elekọta mmadụ